प्रचण्डले प्रमुख स्वकीय सचिव खड्कालाई किन हटाए ? - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | १० पुष २०७२, शुक्रबार ०१:०७ |
काठमाडौं। एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख स्वकीय सचिव रहेका चुडामणि खड्कालाई हटाएका छन् ।
मङ्गलबार सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले खड्कालाई हटाउने निर्णय गरेको हो । भूगोलमा काम गर्ने भन्दै खड्काले प्रमुख स्वकीय सचिवबाट हटेका छन् । उनको स्थानमा रोल्पाका जोखबहादुर महरालाई ल्याइएको छ । शान्ति प्रक्रिया शुरु हुने वित्तिकै महरा अध्यक्ष प्रचण्डका स्वकीय सचिव थिए । तर उनको भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्दै त्यतिवेलै चर्को आलोचना भएको थियो ।
पहिलो गेयरमा मात्रै चल्न जानेका महराले अध्यक्ष प्रचण्डको गतिलाई पछ्याउन सक्दैनन् । उकालोमा पाँच गियर र ओरालोमा पहिलो गेयर मात्रै चलाउने खड्काले फोन नउठाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । सचिवालयमा बसेर राम्रो पनि गर्न नसकेको भन्दै खड्काको आलोचना भएको थियो । मान्छेहरूले डा. बाबुराम भट्टराई जे जस्तो भने पनि उनको सचिवालय सूचना प्रवाहमा भने चुस्त, दुरुस्त भएको बताउने गरेका छन् । तर लाजिम्पाटले कहिल्यै पनि सूचना तथा समन्वयलाई व्यवस्थित गरेन ।
खड्काको ठाउँमा आएका महराको चालढाल बुझेका एक एमाओवादी कार्यकर्ताले पेरिसडाँडामा भने लौ अब हेडक्वाटर पहिलो गियरमा चल्न थालेपछि के होला ? दुई वटै हातमा आइफोन बोके पनि खड्काले फोन नउठाएको पेरिसडाँडामा चर्चा छ । तर नयाँ आएका महराको कार्यशैली पनि खड्काको भन्दा फरक नरहेको भन्दै धेरैले निर्णय नहुँदै दुःखेसो व्यक्त गरेका छन् ।
लाजिम्पाटलाई गतिलो र बलियो सहयोगीको जरुरत छ । तर यो कुरा प्रचण्डले कहिल्यै विचार गरेनन् । न त त्यसतर्फ नै ध्यान दिए ।
Previousशुक्रवारदेखि दिनको ११ घण्टा बत्ती नआउने
Nextइन्धन कालोबजारीमा संलग्न साह र शर्मा जेल चलान
१० आश्विन २०७४, मंगलवार ०१:१०